09/10/2018 - Page 2 sur 3 -
Aretina kitrotro : Zaza iray namoy ny ainy
Mirongatra ny aretina kitrotro. Zaza latsaka ny 5 taona iray amin’ny dimy manantona dokotera no fantatra fa voan’ny aretina amin’izao fotoana izao. Ho an’ny teny Ankasina izao, zazalahy kely 3 taona no namoy ny ainy, …Tohiny
Fifidianana 2018, : Ratsy ny fanomanana
Misy ilay fiteny manao hoe « tsy misy ny tonga lafatra eto ambonin’ny tany » fa mampanontany tena kosa ity fanomanana ny fifidianana filoham-pirenena ity. Mitaraina avokoa noho ny tsy fahatomombanan’ny fikarakarana mantsy ny antsasa-manilan’ireo …Tohiny
Lozam-piarakodia teny Ankazobe : JMJ iray no maty tsy tra-drano
Taksiborosy iray nivadika. Zava-doza no nafitsok’ity fiara iray, satria dia olona iray no voafaoka, ary olona miisa roa naratra mafy. Nitrangana lozam-pifamoivoizana namoizana ain’olona teny amin’ny lalana hiditra an’Ankazobe PK 114+500, ny harivan’ny alahady lasa …Tohiny
Seranan-tsambon’Ankify : Saziana ireo vedety tsy manara-dalàna
Raha efa nilamina tao ho ao ny fifehezana ireo mpanera eny amin’ny seranan-tsambon’Ankify, dia mitady hiverina indray amin’izao fotoana izao. Voasintona avokoa ny entan’ny mpandeha, tsy voasoratra ao anatin’ny bokin’andraikitra ny mombamomba ireo mpandeha, na …Tohiny